I-china Manufacturer High Purity Nitrogen Equipment PSA Nitrogen Generator abakhiqizi nabaphakeli | NOMA
Umkhiqizi Ophezulu Nitrogen Equipment PSA Nitrogen Generator
PSA nitrogen generator, PSA Oxygen purifier, PSA nitrogen purifier, hydrogen generator, VPSA oxygen generator, VSA oxygen generator, ulwelwesi oxygen generator, ulwelwesi nitrogen generator, Liquid (cryogenic) oxygen, nitrogen kanye ne-argon generator, njll, futhi zisetshenziswa kakhulu ezimbonini ka-petroleum, uwoyela negesi, amakhemikhali, i-elekthronikhi, insimbi, amalahle, imithi, i-aerospace, i-autos, ingilazi, amapulasitiki, ukudla, ukwelashwa, okusanhlamvu, izimayini, ukusika, ukushisela, izinto ezintsha, njll. Ngeminyaka yocwaningo kubuchwepheshe bokuhlukanisa umoya nokuhlangenwe nakho kwezixazululo ezicebile ezimbonini ezahlukahlukene, kunamathela ekunikezeni amaklayenti ethu izixazululo zegesi ezinokwethenjelwa, ezonga imali, nezikahle.
Ama-generator e-nitrogen akhiwa ngokuya ngomgomo wokusebenza kwe-PSA (Pressure Swing Adsorption) futhi akhiwa ubuncane bezincibilikisi ezimbili ezigcwaliswe ngesihlungo samangqamuzana. Ama-absorbers awelwa ngenye indlela ngumoya ocindezelweyo (obekuhlanzwe phambilini ukuze kuqedwe uwoyela, umswakama kanye ne-powders) bese ukhiqiza i-nitrogen Ngenkathi isitsha, siwele umoya ocindezelweyo, sikhiqiza igesi, esinye sizivuselele ngokwaso silahlekelwe ukucindezela umoya ophefumulelwe amagesi akhishwe ngaphambili. Inqubo iza iphindaphindwe ngendlela yokujikeleza. Ama-generator aphethwe yi-PLC.
I-PSA Nitrogen Generator iyithuluzi lokukhiqiza i-nitrogen elisebenzisa i-carbon sieve yamangqamuzana njenge-adsorbent - i-adsorption ecindezelwe kanye nokususwa komoya-mpilo emoyeni, okuholele ekwehlukaneni kwe-nitrogen.
Izakhiwo ze-Carbon sieve ye-O2 ne-N2 adsorption ezanda ngokukhuphuka kwengcindezi ye-adsorption kwenza i-O2, umthamo we-adsorption we-N2 ukhuphuke, futhi isilinganiso se-adsorption se-O2 siphezulu. Ama-generator we-PSA nitrogen asebenzisa ngqo lezi zici ze-nitrogen, oxygen ne-CMS. Kepha lokhu akwanele, kuzobhekwa izinto eziningi futhi zisetshenziselwe okuhle kakhulu - yingakho futhi ama-PSA nitrogen generator amukelekile futhi athandwa kakhulu emhlabeni ngoba yenza konke okusemandleni. Umjikelezo we-PSA mfushane - i-O2, i-N2 adsorption iqala kusukela ekulinganeni / ekulinganisweni kwengcindezi, kepha isilinganiso se-O2, N2 diffusion / desorption sehluke kakhulu ukuthi umthamo we-O2 adsorption ngesikhathi esifushane uphakeme kakhulu kunomthamo we-adsorption we-N2. Ubuchwepheshe besizukulwane se-PSA Nitrogen busebenzisa izici zokukhishwa kwe-carbon molecular sieve, kanye nomgomo wokukhishwa kwe-adsorption okucindezelweyo, umjikelezo we-desorption decompression - umoya ocindezelweyo ungena emibhoshongweni emibili yokukhangisa ukufeza ukwahlukana komoya, ngaleyo ndlela kukhiqize ukugeleza okuqhubekayo komkhiqizo we-nitrogen. Kodwa-ke ukwazi lokhu akwanele - bekukhiqize konke lokhu kwabahamba phambili kuwo wonke ama-generator e-nitrogen we-PSA.
Langaphambilini Umshini wokupakisha we-nitrogen osetshenzisiwe embonini yokudla Ibanga leNitrogen Generator
Olandelayo: Isitshalo sekhwalithi ephezulu ye-PSA esithengiswayo esishisayo eningizimu Melika empumalanga ye-Asia ngekhwalithi eqinisekisiwe yokusebenza kahle
Uhlelo Lokukhiqiza I-Nitrogen Ephakeme kakhulu
Ukuhlanzeka okuphezulu kweNitrogen Generator
Ikhwalithi ephezulu yekhwalithi ephezulu
Izinzuzo Zomkhiqizo 1: Isilawuli seRotary Esizenzakalelayo Esiphelele. 2: Ukusetshenziswa kwamandla okuphansi kakhulu. 3: Ukulondolozwa kwamanzi njenge-air compressor kupholiswa umoya. 4: 100% insimbi engagqwali ukwakhiwa ikholomu njengoba ngamunye ASME amazinga. I-5: I-Oxygen ehlanzekile ephezulu yokusetshenziswa kwezokwelapha / esibhedlela. I-6: I-Skid mounted version (Asikho isisekelo esidingekayo) 7: Ukuqala okusheshayo nokuCisha isikhathi ...
Umkhiqizi onekhredithi we-liquid-oxygen-nitro ...
Izinzuzo Zomkhiqizo Sithatha izindlela ezahlukahlukene zokupakisha ngokuya ngezidingo ezithile. Izikhwama ezisongelwe namabhokisi enziwe ngokhuni zivame ukusetshenziselwa ukungangeni manzi, ukufakazisa ngothuli kanye nobufakazi bokushaqeka, ukuqinisekisa ukuthi yonke imishini ihlala isesimweni esifanele ngemuva kokubeletha. Ngokuphathelene nokusebenza, inkampani inesitolo esikhulu ...